Ngokusho kwenye legend, unkulunkulukazi Venus izicathulo uthando, eyawela ezinyaweni zakhe, waphendukela benawo izakhiwo imilingo imbali enhle kusukela lapho imbewu futhi amacembe ngaso sonke isikhathi silwenza ezihlukahlukene uthando potions.
Sekuyisikhathi eside Orchid kwaba uphawu kwezocansi. Namuhla, le mbali ebukekayo iwuphawu isisa bangempela ikhaya ingaphakathi umhlobiso. Kukholakala ukuthi uma umndeni ine-orchid, khona-ke alikho agumenti phakathi kwabashadile.
Ngokusho Feng Shui orchid kuthatha amandla, ngakho-ke angeke abeke ekamelweni - bethola ukuqwasha noma ikhanda.
Ukunakekela orchid ekhaya inezici ayo ethize futhi kudinga ukunakekelwa emnene. Ngakho-ke, uma uke wathola isipho noma wena orchid banquma ukuba lesi sitshalo exotic, okokuqala, hlola indlela yokunakekela orchid ezimbizeni ekhaya.
Lapho ekhula zidinga ukuhambisana nayo koMbuso owodwa segolide - ukudala endaweni yazo bomdabu. Imibala efana ukukhanya okukhulu, umswakama high, izinga lokushisa elilungile ngabo - kusuka 10 kuya 30 degrees.
Emvelweni, cishe yonke orchid kukhona epiphytes, okungukuthi, abahlala kwamanye izitshalo sinamathele emagxolweni izihlahla noma amatshe. Impande yalo orchid ngokwemvelo umzimba ezikhethekile kakhulu ukuthi yakhelwe ngokushesha ungamunca umswakama bese esiwuhogelayo, futhi akuhloselwe ukuba kukhishwe kusukela izakhi emhlabathini. Izimpande ezimhlophe imbali, okuqinile, ezikhulayo amathiphu oluhlaza. Elibazungezile ngokuqhubekayo ukhiphela emoyeni nezikhathi ezimanzi nese omiswe nezikhathi.
Uyabakhathalela orchid ekhaya iqala neqiniso ukuthi ukuthenga esitolo ukuqhakaza orchid, ukujabulela izimbali zayo, bese zidluliselwa ku ebhodweni okhethekile nge izimbobo amanzi elanele. akunakwenzeka kabusha i-orchid ukuqhakaza. Imbiza ukuthi ungahlala ukuthenga esitolo, ufafaze ingxube ekhethekile amalahle, uphayini amagxolo Foam. Ama-orchid ekhaya aqukethe kangcono izimbiza plastic omhlophe, ngoba amabhodwe zobumba overheat elangeni isitshalo izimpande ngokuqinile ithobela kubo.
Sami izimbiza setha ethreyini okujulile amatshe, okuzokwenza sokukhipha amanzi angadingeki bese usethe umswakama ezengeziwe. Orchid utshalwe akukho ngaphezu kwesikhathi esisodwa ngonyaka. Indlela anakekele orchid ezimbizeni ekhaya ungakwazi ukutshela esitolo.
Ngokuvamile, ama-orchid ekhaya kuthiwa best waqhubeka ifasitela elibheke empumalanga, kuya elangeni ekuseni yawela phezu simila. Khumbula ukuthi emini elikhanyayo ilanga imbali akanakuma, futhi ungakhohlwa fafaza isitshalo nsuku zonke nge vodoy.Letom izimbali efudumele kudingeka amanzi amaningi izikhathi 1-2 ngesonto futhi wondla Umanyolo esikhethekile orchid. Nokho kwesinye isikhathi ezimanzisa izimpande ngaphansi kwamanzi agobhozayo, kodwa ke qiniseka uzivumele zome.
Orchid Ukunakekelwa ekhaya akunzima ikakhulukazi uma wazi ezinye izimfihlo. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukulungisa izimbali "ezishisayo" eshaweni, ukubeka endaweni okugeza ngaphansi ukusakaza ezibuthakathaka lokushisa lamanzi 40 degrees. Ngokuvamile, isitshalo blooms emva umphefumulo onjalo. Substrate phakathi waterings kufanele ngokuphelele zome, kungenjalo izimpande ithenda angase ukubola imbali uyafa. Winter-orchid bazithela kanye ngenyanga. Ungakwazi fafaza isitshalo ngamanzi, kodwa akudingeki ukuba ondle. Uma uchelela zisebenzisa efudumele, amanzi supernatant.
Ukuqhakaza orchid kungenzeka okwamanje abajabule kakhulu impilo umlumbanisi. Uma anakekele ikhona imbali ekhaya into yenziwe kahle, ngeke eziqhakaza cishe iminyaka emibili. Ungakwazi sizosheshisa zezimbali izitshalo, uma kunganikeza imbali ekucindezelayo kancane, ezifana eshisa kakhulu, noma ukunciphisa ukuthambisa.
Indlela yokwenza i incubator for the amaqanda ngezandla
Esiqandisini isibonisi icala - enze ukukhetha
Uphi i-Don River? Umlomo nencazelo yomfula uDon